Khaalid Sheykh Muxamed Oo Fariin Culus u diray Obama.(Dhagayso+Akhriso) – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Khaalid Sheykh Muxamed Oo Fariin Culus u diray Obama.(Dhagayso+Akhriso)
On Sep 14, 2017 368 0
Markii ugu horeysay fariin qoraal ah oo xabsiga Guwantanamo kasoo diray Khaalid Sheykh Muxamed oo kamid ahaa mas’uliyiintii Alqaacida ee wax ka abaabulay weerarkii 11 Septembar ayay mu’assasada Al-Saxaab baahisay, 16 sano kadib duulaanadii Manhtan ee afka ciida loogu daray Maraykanka.
Fariintan oo ka kooban inkabadan toban bog, wuxuu Khaalid Sheykh Muxamed u dirayaa madaxweynihii hore ee maraykanka, wuxuuna qoray 8-dii January ee sanadkii 2015.
Sida laga fahmi karo Khaalid Sheykh Muxamed wuxuu si aan caadi ahayn ula socdaa xaaladaha muslimiinta heysta, wuxuuna ugu yaraan la socodaa warbaahinta, maadamaa macluumaadka uu qoraalkiisu ku sheegayo ay yihiin kuwa sugan.
“ Fariintan waxaan kuugu soo qorayaa si aad u akhriso, aadna u fahamto waxa ku jiro hadddii aad tahay qof xakiim ah, islamarkaana go’aan qaadan kara, mana u maleynayo inaad sidaas tahay, fariintan uma dirayo shakhsiyadaada oo kaliya sababtoo ah uma qalantid, waxaa weli gacmahaaga ka qooyan dhiiga walaalaheena iyo caruuteena aad ku leyseen Qazza” ayuu ku billaabay Khaalid Sheykh Muxamed fariintiisa ku socota madaxweynihii hore ee Maraykanka Brack Obama.
Khaalid Sheykh Muxmed wuxuu si faafaahsan uga hadlaya astaamaha ay ku caan baxeen madaxda Maraykanka oo kuu sheegay iney yihiin kuwa caan ku ah dhagarta iyo nifaaqa, waxay ku dheereeyaan buu yiri iney been u sheegaan shacabkooda iyo guud ahaan Umadda, iyagoo u shaqeynaya qolooyin gaar ah, ooo taageera ololaha doorasahda inta ay ku jiraan.
Tusaalooyin dhowr ah ayuu usoo qaadanayaa sida madaxda Maraykanka u sireen una dhagreen shacabka Maraykanka iyo guud ahan caalamka.
Maamulkii Jonson iyo Pentagonka ayaa shacabka Maraykanka uga been sheegay dagaalkii Fitnam, kaas oo ay ku dhinteen 58.000 (Konton iyo Sideed kun) oo Ameerikaan ah iyo malaayiin reer Fiitnaam ah.
Qadiyadii Waterget iyo Neckoson waxay noqotay miithaalka dhabta ah ee dimuqraadiyadda iyo siyaasiyiintiina.
Khaalid Sheykh Muxamed Allaah kasoo saare xabsiga wuxuu sheegayaa in dagaalka uu Obama iyo xulafadiisu hogaaminayaan uusan ahayn mid cusub, uuna yahay mid xiriir la leh dagaalladii qarniyadii dhexe Saliibiyiiintu kusoo qaadeen Muslimiinta.
“ waxaad ku sameyneysaan adiga iyo xulafadiina umadda Islaamka m ahan mid cusub” ayuu yiri Khaalid Sheykh Muxamed.
Su’aalo ay adagtaay inuu ka jawaabo Brack Obama islamarkaana banaanka so dhigeysa xaqiiqda Maraykanka iyo dulmiga uu ku hayo Muslimiinta ayuu hogaamiye Khaalid waydiinayaa Obama, wuxuuna yiri.
Ma xaq bay ahayd mise baadil markii dowladiina Mujaahidka ibnu Sheykh Alliibi ay ku wareejisay diktaatoorigii Masar Xusni Mubaarak, kadibna uu isagu kusii wareejiyay Qadaafi si tacdiib loogu dilo?
Ma xaq bay ahayd mise baadil dilka diyaaridihiina ugu geysteen Yaman wiil u udhalay Sheykh Anwar Al-Cowlaqi oo 16 sano jir ahaa?
Wuxuu Khaalid Sheykh Muxamed waydiinayaa Brack Obama sababaha rasmiga ah ee keenay weeraradii 11 Septembar, issagoo og inaanu Obama si xaqiiq ah uga jawaabi doonin ayuu Khaalid ka jwaabayaa su’aashaas wuxuuna leeyahay.
“Dembiyada dagaal ee aad ka gasheen Filastiin laga soo bilaabo sanadkii 1948 illaa iyo hadana dhacaya ayaa kamid ah waxyaabaha sababay weeraradii 11 Septembar, mustaqbalkana sababi doono weeraro kuwaas lamid ah”.
“ Sanadkii 1998 markii Sheekh Usaama Alle ha u naxriiste iyo Sheekh Ayman Alle ha dhowree iyo Mujaahidiin kale ay soo saareen Fatwo ay ku iclaaminayaan dagaal ka dhan ah dalkiina ma ahayn kuwa matalayay naftooda iyo Jamaacaadka Jihaadiga oo keliya balse waxay matalayeen qof kasta oo muslim ah oo dareemaya inuu ku jiro gumeys iyo dulmi toos ah ama aan toos ahayn oo dhankiiga uga imaanaya” ayuu ku yiri fariintan uu Khaalid Sheykh Muxamed sanadkii 2015 kasoo diray xabsiga Guwantanamo.
“ Maalintii 11 Septembar waxaad goosateen miraha qeyb kamid ah waxaad beerateen markii dowladda Maraykanka ay taageetay weerarkii Isra’il ay ku qaaday dalka Lubnaan sanadkii 1982, markii Saliibiyiintu ay kusoo rogeen reer Ciraaq ciqaab wadareed, ayna sababeen dhimashada nus Milyuun caruur Muslimiin ah,” ayuu sii raaciyay hadalkiisa Khaalid Sheykh Muxamed.
Khaald Sheykh Muxamed oo u hanjabaya Maraykanka ayaa yiri “ wadankiina wuxuu mar labaad guran doonaa miraha duqeymaha diyaaradihiina ka geysanayaan Wasiiristaan, Paakistaan, CIraaq, Yaman, Soomaaliya ……. Wixii dhacay maalintii 11 Septembar waxay ahaayeen wax saxan oo waafaqsan Shareecada Islaamka , umadda Islaamkana ma hilmaami doonto waxaad ka sameyseen Indonesia, Filastiin, Lubnaan, Qazza, Ciraaq iyo guud ahana daafaha caalamka, Umadda Islaamka ma hilmami doonto waxa adiga iyo Yahuuda ay maanta ka geysanayaan Qazza”.
Fariintan oo ah mid dheer islamarkaana ballaaran ayuu Khaalid Sheykh Muxamed wuxuu si aad ah ugu difaacayaa sharciyada weeraradii 11 Septembar, wuxuuna isagoo gar dhiganaya si cad banaanka usoo dhigayaa wajiga dhabta ah ee Maraykanka oo inbadan ay Reer galbeedku ku dadaalaan iney qariyaan.
Warbixin Fariinta Khaalid Sheykh Muxamed u diray Obama iyo Wariye Haashim